Antoine Griezmann oo ka jawaab celiyay eedeymo loo soo jeediyay dhawaanahan – Gool FM
Antoine Griezmann oo ka jawaab celiyay eedeymo loo soo jeediyay dhawaanahan
(Atlético ) 17 Juunyo 2018. Weeraryahanka xulka qaranka France Antoine Griezmann ayaa wuxuu ka jawaab celiyay eedeymaha loo soo jeediyay dhawaanahan, sababa la xiriira inuu ku xaqiijiyay joogitaankiisa kooxda Atlético Madrid fiidiyoow gaaban, si uu u diido ku biirista Barcelona.
Antoine Griezmann oo ka hadlayay arintan ayaa wuxuu la hadlay saxaafada wuxuuna yiri:
“Qalbigaygu ayay ku qarsooneed inaan sii joogayo kooxda Atlético Madrid, waxaan helay jaceel fara badan iyo taageero fara badan”.
“Waxaan doonayay inaan u caddeeyo qof walba sida aan go’aanka u gaarnay, qaarkood way ku riyaaqeen wixii dhacay, halka qaarkood ay ka naxeen, mana u maleynayo inaan ka careysiiyay macalinka ama kooxda”.
Waxaa xusid mudan in Antoine Griezmann uu soo bandhigay fiidiyoow si uu ugu xaqiijiyo inuu go’aansaday sii joogista kooxda Atlético Madrid, inkastoo ay Barcelona si xoogan u xiiseeneesay saxiixiisa.
José Mourinho oo ka hadlay rigoodhadii uu Lionel Messi ka qasaariyay xulka qaranka Argantina